Wararka - Tignoolajiyada RFID ayaa si weyn u wanaajisay heerka maaraynta warshadaha dharka
Gacan-gacmeedka/ Gacanka-gacmeedka RFID
Silikoon Rfid gacan-gacmeedka/ Gacanka gacanta
Xarig-gacan oo tolsan/Fabric Rfid
Warqad Rfid gacan-gacmeedka/ Gacanka gacanta
Xarig/ Gacanka gacanta ee PVC Rfid
Gacan-gacmeedka/ Gacanka Laastikada ee RFID
Gacan-gacmeedka Rfid caaga ah
Gacan-gacmeedka Rfid LED
Gacan-gacmeedka Rfid kale
13.56MHZ RFID kaarka
860mhz ~ 960mhz kaarka UHF
La xidhiidh Chip Card
Kaarka Smart Inlay
RFID summada muraayadda hore
Maktabadda RFID Tag
Rfid Anti-Birta Tags
Tag Cidiyaha RFID
Tag muraayada RFID
Tag Xoolaha RFID
RFID qashinka qashinka
Tag dharka RFID
RFID PPS Tag Dharka
UHF silikoon sumadda dharka lagu dhaqdo
Dharka dharka ee UHF
RFID Keychain/Furaha furaha RFID
NFC Furaha Fobs
Qoraa Akhriste NFC
Qoraa Akhriste NFC oo aan lala xidhiidhin
Qoraa Akhriste NFC Mobile
Kaarka caaga ah
Kaararka PVC ee Caadiga ah ee Daabacaadda gaarka ah
Summada shandadaha/Hang Tag
Furaha PVC ee foornada/Tag-furaha furaha
Alaabta xannibaya RFID
Kiishashka Furaha Baabuurka ee RFID
Jeebka Kaarka Xiritaanka RFID
Kaarka xannibista RFID
Xiritaanka Gacmaha Kaararka
Khamaarka / ciyaarta / turub Chip
Daabacaha Kaarka Aqoonsiga
Haysta Kaarka Aqoonsiga
La xidhiidh Akhristaha
Aqoonsiga Wejiga Heerkulka ee Jidhka
Tignoolajiyada RFID ayaa si weyn u wanaajisay heerka maaraynta warshadaha dharka
Sida aynu wada ognahay, codsiga RFID ee warshadaha dharka ayaa noqday mid caan ah, waxayna keeni kartaa horumar la taaban karo oo dhinacyo badan leh, taasoo ka dhigaysa dhammaan heerka maaraynta dhijitaalka ah ee warshadaha oo dhan si weyn u horumaray. Si kastaba ha noqotee, sannadihii ugu dambeeyay, warshadaha dharka, oo aad ugu dhow warshadaha dharka, ayaa sidoo kale ogaaday in adeegsiga tignoolajiyada RFID ay keeni karto faa'iidooyin badan.
Waqtigan xaadirka ah, warshadaha dharka, shaqada maareynta xogta waxaa inta badan lagu sameeyaa gacanta. Sidaa darteed, inta badan ma jiraan wax caddayn ah oo ku saabsan saxnaanta alaabada, la socoshada inta jeer ee dhaqidda dharka, tirada daaweynta carrada culus, iyo luminta dharka. Waa la raaci karaa oo dhib badan u keeni karaa maamulka dharka.
Kahor inta aan la dhaqin dharka linenka, warshadda dhaqida waxay u baahan tahay inay xaqiiqsato daawaynta kala soocida iyadoo loo eegayo midabka, qaabka, qaybta isticmaalka, iyo qaybta wasakhda. Farsamaynta gacanta sida caadiga ah waxay u baahan tahay 2 ~ 8 qof inay ku qaataan dhowr saacadood si ay u kala saaraan maro kala duwan oo kala duwan, taas oo waqti badan qaadanaysa.
Intaa waxaa dheer, sida loo maareeyo khasaaraha ku jira isku xirka xakamaynta saadka, sida loo farageliyo marka tirada xil-wareejintu ay badan tahay ama yar tahay; sida loola socdo heerka wasakheynta culus, sheegashada, la socodka jirka ajnabiga ah, iyo ku xadgudubka raadraaca ee isku xirka raadinta linenka; sida loola socdo hawlaha dhaqida, heerka wax soo saarka iyo marada ee isku xirka maamulka dhijitaalka ah luminta cawska iyo ilaalinta adkeysiga, heerka isticmaalka wareegga linenka, alaabada hudheelada iyo xakamaynta linen zombie, iwm waa dhammaan meelaha RFID ay door ka ciyaari karto.
Waxaa la dhihi karaa in tignoolajiyada RFID ay isbeddel cusub ku keentay warshadaha dharka. Calaamadaha lagu dhaqo RFID waxay kaa caawin karaan in la aqoonsado wakhtiga dhaqida, shuruudaha dhaqida, macluumaadka macaamiisha iyo inta jeer ee la dhaqo alaabta la duubay, waxay yaraynaysaa heerka qaladka wakhtiga hawlgalka gacanta ee soo jireenka ah, waxayna si wayn u wanaajisaa hufnaanta maamulka.
Si kastaba ha ahaatee, codsiyada la taaban karo, waxaa sidoo kale jira qaar ka mid ah dhibaatooyinka, oo ay ku jiraan dunta, dhejinta calaamadaha iyo foorarsiga, qoyaanka, heerkulka iyo arrimo kale oo badan oo saameyn doona saameynta akhriska ee calaamadda. Si kastaba ha noqotee, si loo wanaajiyo caqabadaha, soosaarayaasha RFID waxay horumariyeen dabacsanaan RFID calaamado dhar-dhaqid oo aan tol lahayn, RFID badhanka dharka lagu dhaqdo, Calaamadaha dharka silikoon iyo calaamado kale oo badan, kuwaas oo ku habboon qalabyada kala duwan ee dharka, heerkulka dhaqidda, iyo hababka dhaqidda.
Waxaa la dhihi karaa in tignoolajiyada RFID ay isbeddel cusub ku keentay warshadaha dharka. Dharka dhaqida RFID tags waxay kaa caawin kartaa in la aqoonsado wakhtiga dhaqida, shuruudaha dhaqida, macluumaadka macaamiisha iyo inta jeer ee dhaqida alaabta la duubay, yaraynta heerka qaladka wakhtiga hawlgalka gacanta ee dhaqanka, iyo si weyn u wanaajiyo hufnaanta maamulka.
Si kastaba ha ahaatee, codsiyada la taaban karo, waxaa sidoo kale jira qaar ka mid ah dhibaatooyinka, oo ay ku jiraan dunta, dhejinta calaamadaha iyo foorarsiga, qoyaanka, heerkulka iyo arrimo kale oo badan oo saameyn doona saameynta akhriska ee calaamadda. Si kastaba ha noqotee, si loo wanaajiyo caqabadaha, soosaarayaasha RFID waxay soo saareen calaamado dhar-dhaqid oo dabacsan, badhanka dharka lagu dhaqdo, calaamadaha dharka silikoon iyo calaamado kale oo badan, kuwaas oo ku habboon agabka kala duwan ee dharka, heerkulka dhaqidda, hababka dhaqidda.
Waqtiga boostada: Dec-30-2021
Warshada Kudar:5Heerka C Dhismaha Bao'guan Tech Park,Guanlan,Degmada Longhua,Shenzhen,Shiinaha.
Warshada Ku dar: Dabaqa 6aad, Jidka 4aad ee Zhongxing, Magaalada Hetang, Degmada Pengjiang, Magaalada Jiangmen, Gobolka Guangdong, Shiinaha.